Central Europe na mba Balkan dị n'otu iji gbochie mpụga
Location: Mbido » Ịdee » Mmekọrịta » Central Europe na mba Balkan dị n'otu iji gbochie mpụga
Ndị ọrụ nchekwa nke Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovakia na Slovenia ekwela nkwa imekọ ihe ọnụ maka ịkwaga mpụga n'ụzọ niile nwere ike, gụnyere iji ndị agha.
Mba isii dị na Central Europe na Balkan keela otu akpọrọ Central European Defense Cooperation.
N'ime ebumnuche otu a bụ na ndị mbịambịa ọ bụla chọrọ itinye akwụkwọ maka mgbapu na EU ga-eme ya na etiti ndị ọzọ.
Minista na-agbachitere ndị Austrian Hans Peter Doskozil kwuru mgbe ha nwesịrị nzukọ na Prague na Mọnde na obodo ya na-akwadebe atụmatụ mmemme zuru ezu nke imekọ ihe ọnụ.
Magellan na ndị otu ya na-enweta nnukwu ugwu na Uniglobe Global Rendezvous
Nzukọ Ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ 2017 na Honolulu: Mepee maka ndebanye aha
Gọọmenti Zanzibar ewepụla nchegbu nchekwa ndị njem nlegharị anya…
Ụgbọ elu ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị na Seattle gaa Tahiti